Trano - Hands Off!
tonga soa amin'ny Tapaka ny tànana - atsaharo ny fanararaotana ankizy
Manolo-tena amin'ny fisorohana sy fiarovana amin'ny herisetra ara-nofo ataon'ny ankizy izahay.
Manjary anisan'ny ekipa
Faly izahay momba ny olona rehetra manohana anay ary te hiaro ny ankizy amin'ny fisorohana.
Ny arisivanay dia misy lahatsoratra an-gazety efa maherin'ny 5000 momba ny herisetra ara-nofo atao amin'ny ankizy.
Ho an'ireo lahatsoratra
Manomeza fanomezana ho an'ny tanjona tsara!
Ny fanomezana rehetra dia manampy amin'ny fanatratrarana olona maro sy fanampiana ankizy maro kokoa.
Ny ankizy sy ny olon-dehibe dia tokony hanaiky ny famantarana ny fanararaotana ara-nofo ary koa ny mpandika lalàna amin'ny fomba maloto, sadista ary mirona amin'ny ara-nofo amin'ny fotoana ara-potoana. Tianay ny handray anjara amin'izany amin'ny alàlan'ny asa fanabeazana sy fisorohana.
Tratra tamin'ny Janoary 2021
Manampy antsika isan'andro ny mpanohana
Nanolo-tena hiaro ny zaza izahay nandritra ny taona maro
Miasa amin'ny boky ho an'ireo ankizy 3-7 taona izahay mba hiarovana azy ireo amin'ny herisetra ara-nofo. Hanamora ny fisorohana ny zaza, ny ray aman-dreny ny boky, nefa koa ny mpampianatra sy ny olona rehetra miara-miasa amin'ny ankizy isan'andro.
Ny fikambanana "Hands Away - Stop Child Abuse" dia miaro fa ity boky ity dia azo omena maimaimpoana ho an'ireo tobim-pitsaboana sy sekoly ary ny ray aman-dreny.
Raha te hahatratra ireo akanin-jaza sy ivon-jaza 56 any Alemana, 000 any Suisse ary 15 any Aostralia miaraka amina ankizy iray tapitrisa mahery, dia mila fanampiana ara-bola amin'ny vidin'ny fanontana sy fizarana izahay. Any amin'ny firenena miteny Alemanina dia manodidina ny 000 ny sekoly ambaratonga voalohany sy fanabeazana fototra misy mpianatra manodidina ny 10 amin'ny kilasy voalohany izay mila fanabeazana ihany koa.
Ao amin'ny tranokalanay no ahafahanao mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny fiarahanay ary koa amin'ny www.leoloewe.com fahatsapana voalohany momba ny tetikasan'ny boky.
Misaotra anao amin'ny fanohananao.
Birao mpitantana ny fikambanana, Ray sy olom-pirenena,
Tsy mandeha izany raha tsy eo ianao!
Ny 95% -n'ny fanomezana rehetra dia mankany amin'ny ankizy mivantana
Ny fanomezana ataonao ho fiarovana ny zaza
Ny fanomezana rehetra dia mandeha mivantana amin'ny fisorohana ny herisetra ara-nofo
Tafakatra 15,000 $
Tanjona 150,000 XNUMX $
IZAY IZAY IZAY IZAY IZAY ATAO ANTSIKA dia IZAO
TSY MISY FAHAFAHANA AZY
Na dia ankehitriny aza ny ankamaroan'ny olona dia mitodika any amin'ny lalana hafa rehefa miresaka an'ity lohahevitra fady mahatsiravina ity ary noho izany dia fady.
Miasa amin'ny asanay izahay dia te handray anjara amin'ny zava-misy fa tsy ny ankizy ihany fa ny olon-dehibe ihany koa dia afaka miaiky ny famantarana ny fanararaotana ara-nofo ary koa ireo mpandika lalàna amin'ny filan'ny nofo, sadista ary ara-nofo amin'ny fotoana mety ary hihetsika araka ny tokony ho izy. Tsy maintsy omena fahefana hiresaka momba izany izy ireo (saingy tsy miaraka amin'ilay nahavanon-doza mihitsy, satria mampitandrina azy izany).
Tokony hazava tsara fa tsy safidy ny fitsarana mitandrina. Na izany aza, tokony ho fantatry ny rehetra fa mpiray tsikombakomba na voasazy izy ireo raha misy fahalalana fanararaotana, ity fa tsy notaterina tany amin'ny manampahefana miaro ny zaza na ny polisy wird.
INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA IZAY
Miaraka amin'ny tranokala Hands Off asehonay ny halehiben'ity lohahevitra ity amin'ny isam-pokontany na tanàna any Alemana, Austria, Suisse ary manerantany.
Ny andian-tsarimihetsika "Siramamy fandidiana", Miaraka amin'ilay mpilalao sarimihetsika lehibe Nadja Uhl na ilay sarimihetsika"Fety mpiady"Asehoy tsara ireo fanamby. Mampalahelo fa manana ny antontan-taratasy ny minisitry ny atitany alemà teo aloha, Thomas de Maizière."Saxon heo”Hesorina amin'ny tranombokin'ny media ARD rehetra.
Naseho tamin'ny 20:15 alina ny horonantsary tamin'ny dinika nifanaovana taorian'izay Sandra Maischberger niresaka antsipirihany. Wilhelm Röhrig, UBSKM, nilaza mihitsy koa izy fa mahatsapa ny famonoana zaza.
Nomera, daty, zava-misy
BUSINY DOLLER BILLION
Ankizy maherin'ny 3 tapitrisa no miaina anaty fahababoana ankehitriny (ny isan'ny tranga tsy voalaza fa mety ho betsaka kokoa noho izany). Ny indostria mifandraika amin'ny sary sy horonantsary fanararaotana ankizy 30 lavitrisa dolara (ny isan'ny tranga tsy voaro dia tokony avo kokoa koa) tsy maintsy hatsahatra.
HITA AZY EO REHETRA - TSY EO AMIN'NY FARITRAKO IHANY!
Betsaka ny olona mbola mino an'io. Saingy miteny amin'ny fiteny hafa ny isa: eo amintsika ny fanararaotana manao firaisana amin'ny zaza. Ampahany tsy ilaina eo amin'ny fiarahamonintsika amin'ny ambaratonga izay mahatonga ny moana tsy miteny sy tezitra - ary tokony hampirisika antsika hanao zavatra.
Any Alemana dia misy momba ny amin'ny fomba ofisialy Dokambarotra fanararaotana ankizy 15,000na izany aza, ambony kokoa ny isan'ireo tranga tsy voalaza. Ny tomban'ny WHO dia manondro fa izany no izy 1 tapitrisa eo ho eo zazavavy sy zazalahy voakasik'izany any Alemana, raha iray amin'ireo 18 tapitrisa Ankizy sy tanora any Eropa.
Mipetraha isaky ny kilasy sekoly any Alemana Zaza 1-2izay iharan'ny herisetra ara-nofo.
About 9 amin'ny tranga 10 ny fanararaotana zaza tsy voatanisa.
80-90% amin'ireo nahavanon-doza no lahy, 10-20% Vehivavy.
FIKAMBANANA MIARO NY ZAZA
Mba hanaovana izany dia miara-miasa amin'ny fikambanana toa an Thorn.org, izay iarahan'i Demi Moore sy Ashton Kutcher na ny Fiaran-tany ambanin'ny tany ANDRIAMANITRA nataon'i Tim Ballard, izay efa nanafaka ankizy maherin'ny 1300 tamin'ny fanagadrana sy ireo fikambanana mpiaro ny zaza hafa ao an-trano sy any ivelany.
Mangataka ihany koa izahay ny amin'ny tokony hamongorana ny lalàna mifehy ny fetra any aoriana. NY VEHIVAVY REHETRA SY NY OLONA niaina fanararaotana tamin'ny fahazazany dia tokony hanana fotoana hanaovana tatitra amin'ny mpampijaly azy.
NY FIDERANA HARENA
Ny tranga rehetra misy ny sary fanararaotana dia tokony hotaterina any amin'ny Interpol, ny BKA na ireo manam-pahefana hafa ary hatrehin'izy ireo izany, izay atao ao anatin'ny 10% ny tranga. Ho an'ity, ny Ny lalàna momba ny fihazonana data dia avao haingana araka izay azo atao, hatao inona politika no iantsoana. Toy izany koa ny vokadratsin'ny lalàna. Any Suisse, ny lamandy na ny sazy mihantona dia mbola azo apetraka noho ny fanananao sary fampijaliana zaza tsy ampy taona. Any Alemana, ny mpivarotra dia azo saziana mafy kokoa noho ny mpanararaotra azy.
Tany Polonina fampidirana castration simika tsy maintsy atao. Na dia toa tafahoatra aza izany, farafaharatsiny maherin'ny 50% amin'ireo mpanao ratsy no miverina. Eto ihany koa dia angatahina ny mpanao politika mba handray fepetra faneriterena mety mandritra ny fitazomana na fitsaboana mba hahazoan'ny mpanao ratsy fikarakarana ara-tsaina mety. Tantara tsy misy farany tokony hajanona ASAP!
Ny fisorohana dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra. Manohana ny fampisehoana kilalao izahay any amin'ny akaninjaza sy sekoly izay mampiseho amin'ny ankizy fa azy irery ny vatany.
Izahay dia miasa amin'ny eran'izao tontolo izao "Amber Alert“Ka, toy ny any Etazonia, dia azo atao ny mitatitra ny tranga fakana ankeriny rehetra. Ity dia hafatra fampandrenesana mandeha ho azy sy hafatra fanairana miafina izay aseho ao anatin'ny minitra vitsy isaky ny telefaona findain'ny olona rehetra izay ao anatin'ny tariby misy ilay toerana fakana ankeriny. Izy io dia miseho miaraka amin'ny toetran'ny zaza ary koa ny famaritana sy ny antsipiriany momba ilay naka an-keriny (ohatra ny takelaka).
Miaraka amin'ireo mpisolovava manam-pahaizana manokana sy ireo fikambanana voalaza etsy ambony, dia manampy mavitrika izahay hiaro ny ankizy ahiana ho tratry ny mpanao ratsy. Ho fanampin'izay, henjehinay am-pahavitrihana ireo nahavanon-doza mba hahazoany ny sazy ara-drariny amin'izy ireo ary iharan'izy ireo ny rariny
Ny 95% ny fanomezanao dia miantehitra amin'ny fiarovana ny zaza!
AZONAO AZONAO MANDAOTRA ETO